Galaxy A30s na-anata mmelite nke gam akporo 10 | Gam akporosis
Galaxy A30s na - anata mmelite gam akporo 10
Samsung ahapụghị ọrụ nke inye gị ya gam akporo 10 ọtụtụ n'ime ekwentị gị. Nke a bụ ihe na-ọzọ pụtara ìhè ugbu a ekele maka nnabata na Galaxy A30s na-enye ya OTA, dị ka akụkọ kachasị ọhụrụ si dị.
Ngwaọrụ amalitelarị ịnweta ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ, nke na-abịa n'okpuru nọmba ụlọ ahụ A307FNXXU2BTD1 Na, dị ka ihe doro anya, ọ na-agbakwunye ọrụ ebumpụta ụwa na atụmatụ nke gam akporo 10, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Mmelite a na-agbasa ugbu a na Afghanistan, Iraq, Laos, Libya, Malaysia, Philippines, Russia, Taiwan, Thailand, Vietnam, na United Arab Emirates. Ikekwe mba ndị ọzọ na-anata ya n'oge a. Ọ bụrụ n’inweghi ike ịchọta ya, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Galaxy A30s, ị ga-enweta ya n’ime ụbọchị ole na ole na - esote ma ọ bụ, nke kachasị ọhụrụ, n’izu ndị na - esonụ. Ihe doro anya bụ na n'ikpeazụ a ga-enye ya n'ụwa niile maka nkeji niile.
Gam akporo 10 melite maka Galaxy A30s
The femụwe ngwugwu abịa na-ahụkarị ahụhụ fixes na izugbe optimizations maka usoro. N'otu oge ahụ, agbakwunye March 2020 patch nche pats ma dịrị ihe 1.5GB. Anyị na-akwado ibudata mmelite ahụ site na njikọ Wi-Fi, iji zere oriri achọghị nke ngwugwu data mkpanaka.
The Galaxy A30s bụ njedebe nke kụrụ ahịa na August 2019 na Super Super AMOLED nke na-eweta ngosi HD + nke 1,560 x 720 pikselụ. O nwekwara 7904nm Exynos 14 processor sitere na ụlọ ọrụ South Korea, 3/4 GB Ram na 32/64/128 GB ohere nchekwa. Batrị mAh 4,000 nwere nkwado maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa 15 W site na ọdụ ụgbọ USB-C nọ n'okpuru mkpuchi, yana 25 + 8 + 5 MP n'azụ igwefoto okpukpu atọ na onye na-agba agba n'ihu 16. MP dị maka ịse foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Galaxy A30s na - anata mmelite gam akporo 10
Chefuo oru Google site na uzo ndi ozo
Ndi Samsung Galaxy S20 Ultra ihuenyo gi anya? Ọ bụghị naanị gị